Fankalazana ny 8 marsa teto Toamasina
Fikambanam-behivavy miisa 155 no nandray anjara
Vorilanina teo nanoloana ny lapan’ny faritra Atsinanana ireo fikambanam-behivavy misy eto antampon-tananan’ny Toamasina renivohitra, ny marainan′ny asabotsy, 8 mars 2014, nanomboka tamin′ny 7 ora maraina, nankalaza ny 8 mars.
Fikambanam-behivavy miisa 155 no tonga nilatro nanoloana ireo manampahefana; ary izany moa dia nialoavana kabary nifandimbiasa toy ny filohan’ny 8 mars, Ramatoa RAMANJANAHARY Christine, vadin’ny lehiben’ny faritra Atsinanana, vadin’ny PDS eto Toamasina ary nofaranan’ny Ramatoa solombavambahoaka NDAHIMANAJARA Johanita.
”Fampiarana ny miralenta no antoky ny fampandrosoana” ireo no nivohitra tamin’ny lahatenin’ireo vehivavy tamin’ny andro iraisam-pirenena ho any vehivavay. Araka nambaran’ny filohan’ny 8 marsa dia nitombo ny salampavitrihan’ireo vehivavy nandray anjara tamin’ny filaharana satria tonga teto amin’ny renivohitry BETSIMISARAKA avokoa ireo fikambanan’ny vehivavy avy any Toamasina II sy ny zanaka ampielezana.
(21) Prud′homme RAKOTOSON : 08-03-2014 - 08:00